Kungani Wena Nekhasimende Lakho Kufanele Nenze Njengombhangqwana Oshadile ngo-2022 | Martech Zone
Kungani Wena Nekhasimende Lakho Kufanele Nenze Njengombhangqwana Oshadile ngo-2022
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 8, i-2022 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 8, i-2022 Gregg Ames
Ukugcinwa kwekhasimende kuhle ebhizinisini. Ukukhulisa amakhasimende kuyinqubo elula kunokuheha abasha, futhi amakhasimende anelisekile maningi kakhulu amathuba okuthi aphinde athenge. Ukugcina ubudlelwano obuqinile bamakhasimende akuzuzisi nje kuphela isiphetho senhlangano yakho, kodwa futhi kulahla eminye yemiphumela ezwakala kusukela kumithetho emisha yokuqoqwa kwedatha njengokuthi Ukuvinjelwa okuzayo kwe-Google kumakhukhi ezinkampani zangaphandle.
Ukwenyuka ngo-5% kokugcinwa kwamakhasimende kuhambisana nokukhuphuka okungenani okungu-25% kwinzuzo)
I-AnnexCloud, Izibalo Zokugcinwa Kwekhasimende Ezimangazayo ezingama-21 zika-2021
Ngokugcina amakhasimende, amabhrendi angaqhubeka nokuthuthukisa idatha ebalulekile yenkampani yokuqala, (ngokusekelwe endleleni abathengi babo abahlanganyela ngayo futhi basebenzise imikhiqizo yabo) engase isetshenziselwe ukwenza kube ngokwakho ukusebenzelana okuzayo namakhasimende akhona namathemba. Lezi zizathu ukuthi kungani, ngo-2022, abathengisi kufanele bagxile kakhulu ekugcineni nasekukhuliseni ubudlelwano obukhona bamakhasimende, obufana nendlela obungenza ngayo nomuntu oshade naye.
Ukuba sebudlelwaneni kuyanakekela futhi kuyanakwa – awumdeleli umlingani wakho uma nje kuqala ubudlelwano. Ukuthenga owakwakho oshokoledi abawuthandayo noma izimbali kufana nokuthumela i-imeyili yomuntu siqu ekhasimendeni — kukhombisa ukuthi uyabakhathalela kanye nobudlelwano enihlangabezwana nabo nobabili. Umzamo owengeziwe kanye nesikhathi ozimisele ukusifaka ekwakheni ubuhlobo, izinhlangothi zombili zingazuza kakhulu kukho.
Amathiphu Okugcina Amakhasimende Akho
Qhubekani nokwazana. Ubudlelwano bakhelwe phezu kwezisekelo eziqinile, ngakho-ke, ukwenza nokugcina umbono omuhle kungabaluleka kakhulu.
Ukuvuleka - Ukudala umkhankaso wokukhulisa i-onboarding, lapho uvula imigqa eqondile yokuxhumana, kusiza ukusungula ibhizinisi lakho njengozakwethu, hhayi nje umdayisi wekhasimende lakho elisha. Le ndlela yokuxhumana eqondile iphinde ikuvumela ukuthi usheshe futhi uthembeke ezimpendulweni zakho uma ikhasimende liza kuwe nombuzo noma udaba, okubalulekile ekwakheni ukwethembana. Kufanele futhi uyisebenzisele ukungena futhi uthole noma yimiphi impendulo abangaba nayo ukuze uthuthukise ulwazi lwabo kangcono. Phela ukuxhumana kubalulekile ebudlelwaneni.
Marketing Automation - Sebenzisa i-automation yokuthengisa. I-Marketing automation ayigcini nje ngokwenza lula inqubo yokukhulisa, ingakusiza futhi ukuthi uqoqe futhi usebenzise idatha ebalulekile mayelana namakhasimende akho. Abakhangisi bangakwazi ukungena emininingwaneni efaka phakathi ukuthi yimiphi imikhiqizo noma amasevisi abangaba nentshisekelo kuwo, ukuthi bayisebenzisa kanjani imikhiqizo noma amasevisi akho, noma uma bephequlule iwebhusayithi yakho. Le datha ivumela abakhangisi ukuthi bakhombe imikhiqizo noma amasevisi amakhasimende kufanele ukusebenzisa, ukubanikeza ithuba lokuthengisa amakhasimende abo ngokuhlangabezana nezidingo zabo. Njengoba nje unaka umlingani wakho ukuze alindele lokho angase afune noma akudinge, okufanayo kufanele kwenziwe kumakhasimende akho, njengoba kuvula umnyango wenzuzo eyengeziwe.
Ukukhangisa kwe-SMS - Hamba kumakhalekhukhwini ngokumaketha kwe-SMS. Kunengqondo ukuthi ukumaketha nge-SMS kuyanda ngokudlanga kwama-smartphones namuhla. Ukuthengisa ngomakhalekhukhwini kunikeza inkampani indlela eqondile ngqo esandleni sekhasimende, futhi kumelela indlela ephumelelayo yokudlulisa ulwazi olubalulekile nolubalulekile. Imilayezo ye-SMS ingaqukatha amadili okukhangisa, amanothi okubonga kwekhasimende, izinhlolovo, izimemezelo nokuningi, konke ukugcina ikhasimende libandakanyekile futhi lijabule. Njengoba ungena nomngane wakho womshado noma wabelana ngemininingwane yosuku lwakho nge-SMS, kufanele wabelane ngolwazi namakhasimende akho nawo, ngesiteshi esisebenza kahle nesisebenzayo.
Amabhrendi asebenzisa ubuchwepheshe ukuze enze ukuxhumana okujulile namakhasimende awo, ahlinzeke ngokungaguquguquki ngemiyalezo yomuntu siqu, futhi agcine imigqa evulekile yokuxhumana azokwakha ubudlelwano obunenjongo namakhasimende abo. Lapho ubudlelwano phakathi kwalaba ababili buqina, yilapho ngamunye engakwazi ukuphuma kukho - njengobudlelwane nomlingani wakho womshado.
Tags: qhubekela phambilisebenza ngesoftwareI-Act-Onannexcloudubudlelwano bamakhasimendeukugcinwa kwamakhasimendeubudlelwano bomthengisi wekhasimendeukuzenzekelayo kokuzenzekelayoubuchwepheshe bokumakethamartechumthengisi we-martechukumaketha amaselulalokubonisaukuzenzelaukumaketha i-smsukumaketha imiyalezoamakhukhi wenkampani yangaphandle
U-Gregg Ames uyiSikhulu Esiphezulu Sezohwebo kwa I-Act-On Software, iplatifomu yokumaketha yokukhula e-Portland, Oregon. Endimeni yakhe, unesibopho se-Act-On's go-to-market nesu lokuthengisa eliphelele. U-Gregg ukushisekela ukukhetha nokuletha ukuzizwisa kwamakhasimende okuphezulu okujabulisa futhi okuhambisana nomsebenzisi wokugcina. Uza nesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-25 ezinhlanganweni ze-SaaS ne-MarTech, ebambe izindima eziphezulu e-Oracle, Kibo Commerce, Conversica, and Turning.
I-Brax: Dala, Lungiselela, Futhi Kala Ukukhangisa Kwakho Komdabu Kusuka Kudeshibhodi Eyodwa
I-Gleam: Izinhlelo Zokumaketha Eziklanyelwe Ukukhulisa Ibhizinisi Lakho